Tababare Jose Mourinho Oo Wax Laga Waydiiyay Xiisaha Kooxdiisa Man United Ee Alexis Sanchez. - Laacib.net
Tababare Jose Mourinho Oo Wax Laga Waydiiyay Xiisaha Kooxdiisa Man United Ee Alexis Sanchez.
Tabaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa wax laga waydiiyay wararkii tan iyo maanta laysla dhex marayay ee sheegayay in kooxdiisa United ay heshay fursad wayn oo ay kula soo saxiixan karto Alexis Sanchez kadib markii ay Manchester City go’aan ku gaadhay in ayna Sanchez ku dalban lacag ka badan 20 milyan Pound taas oo ah dalab ayna Gunners aqbalayn in Sanchez uu ku baxo.
Jose Mourinho ayaa sidii looga bartay ku dooday in ayna wax fiican ahayn in laga hadlo ciyaartoyda kooxaha kale laakiin waxa uu qiray in xidiga ree Chile uu yahay ciyaartoy cajiib ah. Mourinho ayaa xusay in isaga iyo boodhka kooxdiisa Man United ay aaminsan yihiin in suuqa January aanu ahayn si wax badan laga samayn karo balse haddii ay fursada helaan ay isku dayi doonaan.
Ugu horayn Jose Mourinho oo ka jawaabaya wararka kooxdiisa Man United la xidhiidhinaya saxiixa Alexis Sanchez ayaa ku jawaabay: “Anigu ma filayo in ay anshax ama sax tahay in laga hadlo ciyaartoyda kooxaha kale. Haddii uu qof ka hadlo mid ka mid ah ciyaartoydayda, oo uu sheego waanu xiisaynaynaa anigu aad umaan faraxsanaadeen”.
Mourinho oo Sanchez ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Sanchez waa ciyaartoy Arsenal ah. Anigu si xaqiiq ah uma hubo laakiin ugu dhawaan waxa uu doonayaa in uu usbuuc dhamaadka xidho midabka Arsenal. Anigu ma filayo in ay sax tahay in wax laga sheego Alexis Sachez”.
Mourinho oo ka hadlaya suuqa kala iibsiga bisha January ayaa yidhi: “Heerka guud waxa aan sheegi karo ayaa ah in boodhka Manchester United ayna wax badan aaminsanayn suuqa kala iibsiga January, anagu ma aaminsanin la soo saxiixashada ciyaartoy si aanu wax u samayno”.
Mourinho ayaa hadalkiisa ku soo xidhay: ” Waxa aanu aaminsanahay ayaa ah in ay ciyaartoy ciyaartoy kubbada cagta aduunka ah halkaas oo haddii aad fursad aad iyaga ku hesho aad hesho aad isku dayayso. Dhamaan waxaan ka sheegi karo Sanchez ayaa ah in uu ciyaartoy cajiib ah yahay, taas marka laga reebo waa ciyaartoy Arsenal ah waxaanan dareensanahay in ay waajib igu tahay in aanan wax ka badan sheegin”.
Manchester United ayaa heshay fursad wayn kadib markii ay Manchester City go’aan ku gaadhay in ayna Sanchez ka bixin 20 milyan Pound maadaama oo ay doonayso in suuqa xagaaga ay si xor ku heli karto balse Man United ayaa la sheegayaa in ay wado dalab ka qaalisan oo ay Arsenal aqbali karto inkasta oo xidiga ree Chile uu qalbiga gashaday in uu Guardiola la shaqeeyo.
abas luck 13-01-2018 at 1:45 am -
Alex sanches in aan manunited hadi aan ka haleyan lacag ficana waa in aan ka iibinaa sababato faiido ayaa nagu jirtaa intuu bilashaa kaga bixii laha koxood lacagtaa badal kisaa ayada ku radsaan
super 12-01-2018 at 10:11 pm -
mrka dhahysid man u kma iibinaayo adiga miyaaa arsenal iska leh
dahir 12-01-2018 at 9:23 pm -
sanches arsenal waa kadagaa lkn man u kama iibin dono